Birgunj Daily - फोरम नेपालद्वारा चुनावी घरदैलो र पार्टी प्रवेश तिव्र
फोरम नेपालद्वारा चुनावी घरदैलो र पार्टी प्रवेश तिव्र
11/21/2017 गते 00 00 मा प्रकाशित 600 पटक पढिएको
बीरगंज ५मंसिर ।
संघिय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साले चुनावी रणनीति तथा घरदैलो र पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई तिव्र बनाएको छ ।
आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रचार प्रसार अन्तर्गत संघिय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा गठबन्धनले आज निर्बाचन क्षेत्र न. २ अन्तर्गत अलौमा चुनाबी छलफल तथा अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट सम्पम्न गरेको छ । कार्यक्रममा क्षेत्र न. २ को प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार विमल श्रीवास्तव, शशिकपुर मिया, मुकेश द्धिबेद्धी,तबरेज अहमद, बह्मदेब यादब बिरेन्द्र यादब लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस्तै संघीय समाजवादी फोरम नेपालले वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १४ पिपरामा आज चुनावी घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधीसभा सदस्यका उम्मेदवार प्रदीप यादवको अगुवाइमा घरदैलो कार्यक्रम भएको हो । घरदैलो कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगी, जिल्ला उपाध्यक्ष सुन्दर कुर्मी , लगायतका नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
त्यसैगरी नेपाल संघीय समाजबादी पाटीले पर्साको निर्वाचन क्षेत्र न ३ को भौराटार पटनी, बलिरामपुर, गादीमा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा पाटिका कमल यादव, रामनिवास चौरसिया लगायतका नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
यसैविच संघिय समाजवादी पाटि फोरम र राजपाले आज क्षेत्र नम्बर ४ को भिखमपुरमा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा प्रदेश सभा खका उम्मेदवार सिंहासन साह, सुधिर कर्ण, जगदिश पटेल, मदन चौहान, सुशिल कर्ण लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
यसैविच संघिय समाजवादी फोरमले पर्साको क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गत बहुअर्वामा पाटि प्रवेश कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नवप्रवेशीहरुलाई पाटिका तर्फबाट प्रतिनधिसभा उम्मेदवार हरिनारायण रौनियारले टिका लगाई स्वागत गर्नुभएको थियो । साथै क्षेत्र नम्बर ३ मा फोरमको घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार प्रह्लाद गिरी, नेताहरु प्रदीप जैसवाल, अजय गुप्तालगायत सयौंको सहभागितामा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
यसैविच संघिय समाजवादी फोरमले पर्साको क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गत बहुअर्वामा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नवप्रवेशीहरुलाई पार्टीका तर्फबाट प्रतिनधिसभा उम्मेदवार हरिनारायण रौनियारले टिका लगाई स्वागत गर्नुभएको थियो । साथै क्षेत्र नम्बर ३ मा फोरमको घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार प्रह्लाद गिरी, नेताहरु प्रदीप जैसवाल, अजय गुप्ता लगायतको सहभागितामा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।